ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်က ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံကြီးကို လမ်းသွားလမ်းလာများနောက်မှာ ခံ့ထည်စွာတွေ့ရစဉ်။ ကိုတိတ်/မြန်မာတိုင်း(မ်)
အထက်တန်း ကျောင်းသူဘ၀က ကျူရှင်တက်ဖို့အတွက် နေ့တိုင်းနီးပါးလောက် ပန်းဆိုးတန်း
ဖြတ်သွားတိုင်းလည်း မြို့လယ်ကောင်ကို လူကြီးတွေလိုမျိုး 'ငါလည်းလာရတယ်၊ ငါလည်း
အရာဝင်တယ်'ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လူက မြောက်ကြွပြီး အမြဲလိုပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီမြို့လယ် လမ်းမကြီးကနေ ရရှိတဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ် တွေကိုလည်းပဲ
ဘယ်တော့မှ ရိုးအီတယ် မရှိခဲ့ဘူး။
အလယ်ဘလောက် တရားရုံးချုပ်ကြီးဘေးက မြို့ နယ်စာတိုက် အဆောက်အအုံထဲမှာနေတဲ့
သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကိုဆိုရင် ကိုယ့်မှာ အားကျလို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူး။
သူ့အမေက စာတိုက်မှူးမို့လို့ အဲဒီမှာနေရတာဆိုတော့ ကိုယ့်မိဘတွေလည်း ဒီလမ်းထဲမှာ နေစရာ
ရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့လည်း မကြာခဏ တွေးမိခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီ စာတိုက်လေးကလည်း လေးထောင့်ဆန်ဆန် ငါးထပ်တိုက်ရဲ့ ညာဘက် ခြမ်းအောက်ဆုံးထပ်
ထင်ရှူးပုံးကြီး ထောင်ထားသလိုမျိုး ဒီဇိုင်းဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာတော့ တော်တော်လေးကို
ကျူရှင်သွားဖို့ အိမ်ကနေ ဘတ်စ်ကားစီးလာရင် ပန်းဆိုးတန်း မှတ်တိုင်မှာဆင်း၊ အဲဒီ မှတ်တိုင်မှာ
ရောင်းတဲ့ 'ရွှေလှေခါး' မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ အချဉ် နိုင်နိုင်၊ ငရုတ်သီးများများနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲစား။
အဲဒီဆိုင်က ဟိုတုန်းကတော့ ကိုလိုနီခေတ်တိုက်ကြီးရဲ့လှေကား ခြေရင်းမှာ ဖွင့်ထားတာပေါ့။
ခုတော့ သူ့နေရာမှာ ရုပ်ဆိုးဆိုးခေတ်ပေါ် တိုက်သစ်ကြီး ဖြစ်သွားပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ ရွှေလှေခါးမှာ
မစားချင်ရင်တော့ သူငယ်ချင်းမကို သူ့အိမ်မှာ အရင်ဝင်ခေါ်ပြီး မေစင်တာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်
ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်းထောင့်က ကုန်သွယ်ရေးရုံးကြီး (မီးလောင်သွားလို့ ၀င်းခတ်ပြီး
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီအတိုင်းပစ်ထားရာကနေ ခုတော့ တိုက်မြင့်ကြီးဆောက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်)
အောက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ တင်တင်အေး မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ သွားစားကြတယ်။
ပြီးတော့မှ ကျူရှင်သွားကြ၊ ကျူရှင်က ပြန်ရင်တော့ အမေ့အိမ် စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာ ၀င်မွှေကြတယ်။
ညနေဘက်တွေဆိုရင်တော့ လမ်းဘေး စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ၀င်တိုးကြတယ်။
၀ယ်ဖြစ်တာကတော့ စာစီစာကုံး စာအုပ်တွေပဲများပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုပေမယ့် လူအထင်ကြီးခံချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းက
ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် လူအထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်ကြတာ နောက်တစ်ခု ရှိပါသေး
အဲဒါကတော့ ကျူရှင်ပြေးပြီး ပန်းဆိုးတန်း ပန်းချီပြခန်းထဲမှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်ကြတာပါ။
ပန်းချီအကြောင်း သိသလို ဂိုက်တွေဖမ်းပြီး ဟိုဒီလျှောက်ပြောတဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ ဟန်ပန်ကို ခုချိန်မှာ
ပြန်တွေးကြည့်မိတော့ ငယ်ဘ၀ အမှတ်တရတွေက လက်ရှိဘ၀အမောတွေကို တဒင်္ဂတော့
တစ်ခါ ကျူရှင်ပြေးကြတာ အဲဒီ လမ်းမပေါ်မှာပဲ ဆရာနဲ့တည့်တည့်တိုးလို့ ကောင်းကောင်းကြီး
တကယ်တော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမကြီးနဲ့ ကျွန်မကြားမှာ အမှတ်တရတွေမှ အများကြီးပါ။
ကျွန်မချစ်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဲဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ထောင်းထောင်းကြေအောင် လျှောက်ခဲ့
အဖေရယ်၊ အမေရယ်နဲ့ ကျွန်မတို့ ညနေပိုင်း မြို့ထဲလာရင် ကာစတန်ရုံးရှေ့ ကမ်းနားလမ်းကနေ
ဘတ်စ်ကားစီးပြီး အိမ်ပြန်ရတာဆိုတော့ အဲဒီ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကျွန်မတို့မိသားစု
အမှတ်ရဆုံးကတော့ အောက်ဘလောက်က ဆိပ်ကမ်းရုံးကြီးနားမှာ စမူဆာသုပ်စားရတာပဲ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက တစ်ပွဲစားပြီးလို့ နောက်တစ်ပွဲ ထပ်စားချင်ပေမယ့် စည်းကမ်းကြီးတဲ့ အမေက
ထပ်မကျွေးတော့လို့ တသသဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စမူဆာသုပ်။
ခုများတော့ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ပဲစားစား အဲဒီတုန်းက အရသာကို ပြန်မရနိုင်တော့
ခုတော့ အမေလည်း မရှိတော့ဘူး။ ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတွေထဲက တချို့ ဆို ဘယ်လိုမှ
ကျွန်မသဘောကျခဲ့တဲ့ အဲဒီလမ်းပေါ်က အဆောက်အအုံတွေကလည်း တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အမေ့ကို အမြဲတမ်းပဲ ချစ်နေသလိုမျိုး ဒီလမ်းကြီးကို ကျွန်မချစ်နေ၊ သဘောကျနေ
မိဘကျေးဇူးဆိုတာ ကောင်းကောင်းမသိတတ်ခင် အချိန်တုန်းက အမေကို အမေမို့လို့ ချစ်ခဲ့ရပြီး
အရွယ်ရောက်လို့ မိဘကျေးဇူးကို နားလည်ချိန်မှာ အမေ့ကို ပိုပြီးမြတ်နိုးလို့ ချစ်ခဲ့ရသလိုမျိုး
ဒီလမ်းကြီးကိုလည်း သူ့ရဲ့အတိတ်တွေ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေကို မသိဘဲ ငယ်ဘ၀အချိန်တွေမှာ
ရိုးရိုးလေးသဘောကျခဲ့ပြီး ခုချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အသက်အရွယ်ရလာချိန်၊ အထိုက်
အလျောက် ဗဟုသုတတိုးလာလို့ သူ့အကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင် သိလာချိန်မှာ သူ့အပေါ် ကျွန်မရဲ့
နှစ်ခြိုက်မှုက တိုးလို့များလာသလို တန်ဖိုးလည်းထားတတ် လာခဲ့ပါပြီ။
ထိထိရောက်ရောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မွေးရပ်မြေမှာ ဒီလိုလမ်းမ ကြီးရှိလို့ ကျွန်မဂုဏ်ယူ
ပြင်သစ်တွေ သူတို့ရဲ့ လမ်းမကြီးကို သဘောကျသလိုမျိုး ကျွန်မလည်း ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမကြီးကို
သူ့ပေါ်က အဆောက်အအုံ တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို သိရှိလာတဲ့အခါမှာ
ဒီအဆောက်အအုံတွေ ဆုံးရှုံးသွားတိုင်း ကျွန်မ သိပ်ရင်နာရပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သမိုင်း၊ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်း၊ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ သမိုင်းတွေကို
ပြန်ပြီး ပြောပြပေးနေသူတွေ မဟုတ်ပါလား။
(၆၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင် အခမ်းအနားကို မြိတ်ခရိုင် မြိတ်မြို့ မြို့မအားကစားကွင်း တွင် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက် နံနက်(၄း၂၀)နာရီက ကျင်းပရာ မြိတ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလွင်ကိုဦးနှင့်ဌာန ဆိုင်ရာများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး အလံတင် အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော်အလံအား တိုင်ထိပ်သို့လွှင့်ထူပြီး အလေးပြုခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက်(၆၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ သ၀ဏ်လွှာ ဖတ်ပွဲကို နံနက်(၇) နာရီတွင်ဆက်လက် ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန်ထံမှ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာအား မြိတ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလွင်ကိုဦးက ဖတ်ကြားသည်။
ဆက်လက်၍(၆၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိသူများအား မြိတ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြသည်။ အခမ်းအနားသို့ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် အငြင်းပွားမှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီး နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပြီး ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့ကစတင်ကာ နယ်နိမိတ် တိုင်းတာမှုတွေ ပြုလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းမှာ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် နိုင်ငံခြားရေးရာ ညွန်ကြားရေးမှူးနဲ့ မြေတိုင်းညွန်မှူးတို့ပါဝင်မယ်လို့ တမူးခရိုင်အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဇောလင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။
"အခုဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကို နှစ်နိုင်ငံ Join တိုင်းမှာ ၆ ရက်နေ့မှာ တိုင်းမှာပါခင်ဗျာ နိုင်ငံခြားရေးရာ ညွန်မှူး၊ မြေတိုင်းကညွန်မှူး၊ ကကကြီးက တစ်ယောက် နောက် ကျနော်ပါမယ်"
အိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကတော့ စစ်သံမူးနဲ့ မြေစာရင်းအရာရှိတွေ ပါဝင်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလဆန်းကစပြီး အိန္ဒိယအစိုးရဘက်က အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်မှာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုထားရှိဖို့ မြေထိုးစက်တွေသုံးပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ စတင်ရာကနေ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အငြင်းပွားမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် နယ်နိမိတ်ကျောက်တိုင်အမှတ် ၇၇ နဲ့ ၇၉ အကြားမှာ အိန္ဒိယဖက်က အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတာကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမယ့် အိန္ဒိယက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တမူး၊ ကလေးနဲ့ မင်းကင်းမြို့တွေမှာ အိန္ဒိယအစိုးရကို ကန့်ကွက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်က လုပ်ငန်းတွေဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကာ အခုလို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အနု ပညာ ခရီးလမ်း မှာ ပရိသတ် လိုချင် နေတဲ့ ပုံစံ တွေ ထိ ရောက် အောင် လုပ် ပြ သွား ချင် သည့် သရုပ် ဆောင် ရွှေမှုံ ရတီ ဟာ လက်ရှိ အနေ အထား ကို ကျေ နပ် မှု မရှိ သေး ဘူး လို့ ထုတ် ဖော် ပြော ပါ တယ်။
အလုပ် အားလုံးကိုကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ပါ တယ်။ ဘယ်အရာမှ အဆင် မပြေတာ မရှိ ဘူး ပါဘူး။ တစ်ခု တည်း၊ တစ်သမတ် တည်းမသွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိရောက် နေတဲ့နေရာကို ကျေနပ် မှုမရ သေးပါဘူး။ ဘယ် လို ပြောရမလဲ၊ကိုယ်ရရှိနေတဲ့ပညာ လေးက ဘာမှ မရှိသေးဘူး။ ပညာပေါ့ နော်။ ပညာက ၀မ်းစာအပြည့်မပြော နဲ့၊ တစ်ဝက်တောင်မပြည့် သေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ကပညာ တွေ အများကြီး လိုအပ်နေတဲ့ သူ၊ အများ ကြီး သင်ယူဖို့ လို အပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ပါ။ ကားရိုက်ရင်းနဲ့ပဲ ဆရာ တွေ ဆီက သင်ယူ ရပါတယ်။ ဇာတ် ရုပ် အားလုံးကို လုပ် ချင်နေတယ်။ အသစ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆိုတော့ မစုံသေး တာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ နယ်ပွဲတွေသွားရင် တော့ သီချင်းဆိုပြတယ်။ အဆိုတော်မဟုတ် တော့ နည်းနည်းပါးပါးပဲရပါတယ်။ ဇာတ်ကား ထဲမှာဆိုရင် ကာရိုက်တာနဲ့ လိုက်အောင်ပဲ ၀တ်ဖြစ်တယ်။ ကာရိုက်တာ ဆိုတာကလည်း ဒီလူတန်းစားက ဘယ် လို ၀တ်တယ်။ ဟို လူတန်းစားက ဘယ်လိုဝတ်တယ်ဆိုတာမျိုး ပေါ့။ ဖက်ရှင်ကို အရမ်း ဆန်း တာ မ၀တ်ဖြစ် ပါ ဘူး။ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ သင်ယူစရာရှိပါ တယ်။ အရည်အချင်း နည်း နည်းလို ပါ သေး တယ်။ အဲဒီ အတွက် လည်း လေ့လာပါတယ်”” လို့ ရွှေမှုံရတီ က ပြောပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီ အနေနဲ့ တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆို ဖို့ ရှိ တာ ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န ၀ါရီလ၊ ဖေဖော် ၀ါရီလ၊ မတ်လ အထိ တစ်လမှာ တစ်ကား နှုန်းနဲ့ သာ ကားရိုက် လျှော့ ရိုက် သွားမှာဖြစ် တယ်။
(၆၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကလေးပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက် နံနက်(၉)နာရီ က မြိတ်မြို့မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းရုံးတွင် ကျင်းပရာ ရှေးဦးစွာ မြိတ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလွင်ကိုဦးက အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထိုနောက်မြိတ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ကလေး အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မိုးကျော်အောင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များ၊ မွေးကင်းစ ကလေးများ၏ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့်မိခင်နို့်တိုက်ကျွေးမှု အရေးပါပုံ များကို အသိပညာပေး ဟောပြောသည်။
ဆက်လက်၍ (၆၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စံပြမိခင်/ ကလေးပြိုင်ပွဲတွင် စံပြမိခင် ဆုရရှိသူနှင့် စံပြကလေး ဆုရရှိသူအား မြိတ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လည်းကောင်း၊ ကလေးပြိုင်ပွဲ မွေးစမှ(၆)လ၊(၆)လမှ (၁)နှစ်၊(၁)နှစ် (၆)လမှ(၂)နှစ် တို့တွင်ဆုရရှိသူများအား မြိတ်ခရိုင် မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းနှင့် တာဝန် ရှိသူများက လည်းကောင်း ဆုများအသီးသီး ပေးအပ် ချီးမြှင့်ကြ သည်။
ထိုနောက်စေတနာရှင် အလှူရှင်များက (၆၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စံပြမိခင်/ ကလေး ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသော ကလေးများနှင့် အမွှာကလေးငယ်များကို လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အသီးသီး ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုက်ကလပ်များတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးစွဲမှုများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စောင့်ကြည့်နေပြီး တွေ့ရှိပါက အဆိုပါနိုက်ကလပ်ကို ရာသက်ပန် ပိတ်သိမ်းမည်
ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်က နိုက်ကလပ်အများစု ဖွင့်လှစ်တည်ရှိနေသော မင်္ဂလာဈေးဝင်းအား မြင်တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် နိုက်ကလပ်များတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးစွဲမှုကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူသွား မည့် အပြင် အဆိုပါ နိုက်ကလပ်ကိုလည်း ရာသက်ပန် ပိတ်သိမ်းသွားသည် အထိအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယရဲမှူးကြီးမြင့်အေး က ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရသည်။
“ကလပ်တွေမှာ ရန်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရင်တော့ ထိုက်သင့်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ ဥပမာ-ဆိုင်ကို ယာယီပိတ်သိမ်းပြီး အရေးယူနေတယ်။ဒါပေမဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ် သုံးစွဲတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်တော့ ဘယ်နိုက်ကလပ်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရာသက်ပန် ပိတ်သိမ်းပြီး အရေးယူသွားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်း နေရာအားလုံးမှာ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနိုက်ကလပ် အများစုတည်ရှိနေသည့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ တာဝန်ရှိသူ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီးမြင့်အေးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးမှု ၂၈၆ မှုကို ဖော်ထုတ် အရေးယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စပ်ဆက်သည့်ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူဝယ်ယူ၍ ရရှိနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရ သည်။
သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နှင့် ကေအန်ယူအဖွဲ့တွေ့ဆုံ
သမ္မတနှင့်ကေအန်ယူအဖွဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဦးရဲထွဋ်)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တိုနဲ့ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖုိုး ဦးဆောင်တဲ့ ကေအန်ယူ ကုိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ကေအန်ယူက ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်က တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကေအန်ယူအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“သမ္မတနဲ့ တွေ့တော့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီအတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသား ညီလာခံတခု ထပ်ပြီး ခေါ်မယ်၊ ဘားအံမှာလည်း တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ရေး ကော်မတီ တွေ့ဆုံ မယ့် အခြေ အနေတွေ ဆွေးနွေး သွားတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်း ဒီနေ့ န့လယ် ၂ နာရီလောက် နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ကိစ္စမှာ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ကျနော်တို့ဘက်က ဆွေးနွေးတယ်။ သူကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တကယ်လိုအပ်တယ်၊ သူအနေနဲ့ နောက်မဆုတ်တမ်းသွားရမှာပဲ၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းမှု ရှိမှာပဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။”
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့အပေါ်လည်း ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“နားလည်မှုလည်း ပိုရှိလာတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလည်း သူ့အမြင်၊ ကိုယ့်အမြင် တင်ပြနိုင်လာတယ်။ တွေ့ဆုံမှုရှိလေ အမြင်တွေ၊ သဘောထားတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုလို့ ပိုရလာတာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေထက်စာရင်တော့ အပစ်မရပ်ခင်နဲ့ အပစ်ရပ်ပြီးနောက် ရှေ့ဆက်သွားဖို့က ပိုပြီး နီးစပ်သွားတာပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကလည်း တရားမျှတမှုအပေါ် အခြေခံတယ်။ လိုအပ်မှု ရှိတာက တည်ဆောက်ယူရမှာပေါ့၊ အသေအချာ စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်။”
ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေကတော့ ကေအန်ယူအဖွဲ့ဟာ သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ လေးကြိမ်ဆီ တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဟာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေထဲမှာ တဖွဲ့တည်းရှိသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကေအန်ယူနဲ့အစိုးရ တွေ့တာ လေးကြိမ်ရှိပြီ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတကြိမ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ၂ ကြိမ်၊ ၂၀၁၄ မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တာ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာ သမ္မတနဲ့ ၄ ကြိမ်တွေ့တယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ၄ ကြိမ်တွေ့တာ ဒီတဖွဲ့ရှိတယ်။”
ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အစိုးရဘက်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးခင်ရီ၊ ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာက အကြံပေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကေအန်ယူဘက်က ဥက္ကဋ္ဌ မူတူးစေးဖိုး၊ အထွေအထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒုို စောကွယ်ထူးဝင်း၊ ကာကွယ်ရးဌာန ၀ာာဝန်ခံ ပဒို စောရောဂျာခင်၊ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်၊ တပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့ကလည်း ကေအန်ယူ အဖွဲ့ဟာ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှာ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အခု ခရီးစဉ်အပြီးမှာ ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်ရာ ဘားအံခရိုင်အတွင်းက လောခီးလာမှာ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့ ညီလာခံကို ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Google မှာအရှာများဆုံးစာလုံးက Sex မဟုတ် Facebook ပါ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ သမ္မတနဲ့ ဒုတိယသမ္မတအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်တွေထဲက ပုဒ်မ ၅၉ (ဃ) နဲ့ (စ) ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခု ပခုက္ကူမြို့မှာ မနေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူဟာ ပခုက္ကူမြို့ အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက်နေ ဦးကျောက်ဆိုသူဖြစ်ပြီး၊ ပခုက္ကူမြို့ လူစည်ကားရာလမ်းမကြီးတွေအနှံ့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ မျက်မြင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုသန်းနိုင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ဦးကျောက် အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက်ထဲမှာနေတယ်၊ NLD ပါတီဝင်ပါပဲ၊ မနေ့ကသူတို့ NLD ရုံးထဲမှာပဲ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားလေး တစ်ခုလုပ်တော့ ကျနော်တို့ကိုလည်း သူတို့ကဖိတ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က အခမ်းအနားကို သွားတက်လိုက်တာ၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သီတာလမ်းနဲ့ မြို့မလမ်းရဲ့ထောင့်မှာ ဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ဆီဖုန်းဝင်လာတာနဲ့ ကျနော်နဲ့ ၈ပူးအုပ်စုက အဲဒီကိုသွားလိုက်ရတာပေ့ါ၊ သူကလည်း ခွင့်ပြုချက်ဘာညာ တင်မထားဘူးလို့ ဟိုရောက်တော့ သိလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ ကျနော်တို့ကတောက်လျှောက် သူ့ဘေးကနေပြီးတော့ ရံပြီးနေလိုက်မိတယ်"
ဦးကျောက်ကို ဆန္ဒပြနေတုန်း ရဲစခန်းရှေ့အရောက်မှာ ရဲတပ်သားတစ်ဦးက စခန်းထဲလိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်ပေမယ့် လိုက်မသွားပဲသူ့ဆန္ဒအတိုင်း ခရီးဆုံးတဲ့အထိ လျှောက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ညအထိတော့ ဦးကျောက်ကို တစုံတရာ အရေးယူမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ မနေ့ကလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မြိတ်မြို့ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့အပါအဝင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့က ပုဒ်မ ၁၈ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီတန်းလှည့်မှု၊ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဆူပူအောင်လှုံဆော်မှု စတဲ့ဥပဒေတွေဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့ လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့ခွင့်ရဖို့၊ စည်းရုံးဟောပြောခွင့်ရဖို့တို့အတွက် ပေါ်တော်မူစေတီမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တရားဝင်ဆန္ဒပြခွင့်တင်ခဲ့ပေမယ့် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပယ်ချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ခွင့်ပြုချက်မလျှောက်တော့ဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့သိရပါသည်။
မြိတ်မြို့ဆန္ဒပြသူတွေက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်ဖို့နဲ့ ပြည်သူလူထုမလိုလားတဲ့ ဥပဒေတွေ အမြန်ပယ်ဖျက်စေလိုကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဒီမိုကရေစီအမြန်ရစေလိုကြောင်း ဆုတောင်းပြီး၊ ဆီမီးထွန်းတာ၊ ဗူဖောင်းတွေ လွှတ်တင်တာတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကရင်ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ထို့ကော်ကိုးကျေးရွာတွင် အင်္ဂါနေ့ညက စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် ကရင်ရိုးရာဒုံးယိမ်းအကများ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအစီအစဉ်ကို ညလုံးပေါက်ကျင်းပခဲ့ပြီး နှစ်ဟောင်းမှနှစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းသည့် အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည့် ည(၁၂)အချိန်တိတိတွင် မီးရှုးမီးပန်းများ ပစ်ဖောက်ပြီး နှစ်သစ်ကို ပျော်ရွှင်စွာကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းခရိုင်တွင် ဘိန်းခင်းဧက ၆၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီး
ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းခရိုင် အတွင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်ကနေ ၂၄ ရက်အထိ ဘိန်းခင်း ဧက ၆၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထွန်းဇံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးဆောင်ပြီး ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးရေးအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ထွန်းဇံမြို့နယ်နဲ့ ကျီးခါးမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ ဘိန်းစိုက်ခင်း ၆၇၂ ဒဿမ ၈၆ ဧကကို သွားရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့အထိ မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုပေါင်း ၂၃ မှုကို ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ ယူ ၂၂ က ထိုင်းကလပ် မြောက်တောင်အသင်းကို ၃-၂ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ ၂၂ အသင်းက ထိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် မြောင်တောင် အသင်းကုို ၃ ဂိုး – ၂ဂိုးနဲ့ အနုိုင်ရ သွားခဲ့ပါတယ်။
၁မြန်မာယူ ၂၂ အသင်းဟာ အာရှဖလား ယူ ၂၂ ပြိုင်ပွဲ ၀င်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့် ပြင်ဆင်နေတဲ့ အသင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခြေစမ်းပွဲကုို မိနစ် ၄၀ သုံးပိုင်းခွဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာအတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကို အောင်သူ၊ ချေပဂိုးနဲ့ အနိုင်ဂိုးတွေကို ရန်နိုင်ထွေးက သွင်းယူခဲ့တာပါ။
ဒုတိယ ခြေစမ်းပွဲအဖြစ် ထိုင်း လက်ရွေးစင် ယူ ၂၀ အသင်းနဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံ ယှဉ်ပြိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ ၂၂ အသင်းဟာ အာရှ ယူ ၂၂ ပြိုင်ပွဲ ၀င်ဖိုအတွက် အိုမန်နိုင်ငံကို ဇန်န၀ါရီ ၉ ရက်နေ့ သွားရောက်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စု (အေ) မှာ ပါဝင်တဲ့ မြန်မာအသင်းဟာ အိမ်ရှင် အိုမန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျော်ဒန်တို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။
အီရတ်မှာ ဖာလူဂျာ ကို အယ်လ်ခိုင်းဒါး နွယ်တဲ့ အဖွဲ့တွေသိမ်းထား
ဖာလူဂျာမှာ အစိုးရ ဆန့်ကျင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေ ကိုမြင်ရ
အီရတ် နိုင်ငံမှာ ဘဂ္ဂဒက် အနောက်ဖက် က အချက်အချာ ကျတဲ့ ဖာလူဂျာမြို့ ကို ဆွန်နီ စစ်သွေးကြွ အုပ်စု တခု နဲ့ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် တွေက သိမ်းထား ပြီလို့ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ သတင်း ရပ်ကွက်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဖာလူဂျာမြို့ တောင်ပိုင်းကို အယ်လ်ခိုင်းဒါးနဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ ဆွန်နီ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တခုက သိမ်းယူ ထားပြီး မြို့ရဲ့ ကျန်တဲ့ အပိုင်း တွေကိုတော့ အယ်လ်ခိုင်းဒါး နဲ့ မဟာမိတ် ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် တွေက ထိန်းချုပ် ထားတယ်လို့ အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ အီရတ် သတင်းထောက် တဦးက ပြောပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ တုန်းက ရာမာဒီ မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဆွန်နီ အာရပ် တွေရဲ့ သပိတ်စခန်းကို အစိုးရက ဝင်ဖြိုခွင်း ခဲ့ရာကနေ တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်ခဲ့ တာပါ။
ဆွန်နီတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒေသခံ အာရပ်တွေက ဝန်ကြီးချုပ် နူရီ အယ်လ် မာလီကီ ဦးဆောင်တဲ့ ရှီးယား အစိုးရဟာ သူတို့ အပေါ် ခွဲခြား ဆက်ဆံတယ်လို့ မြင်နေ ကြပါတယ်။
လူနည်းစု ဖြစ်တဲ့ သူတို့ကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ တွေ သုံးပြီး ဖိနှိပ် နေတယ် လို့လည်း ဆွန်နီ တွေက ပြောကြ ပါတယ်။
မကြာသေးခင် ရက်တွေ အတွင်း ဖာလူဂျာနဲ့ ရာမာဒီ မြို့တွေ တဝိုက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို ကြည့်ရင် အစိုးရ တပ်တွေက တဖက်၊ အယ်လ်ခိုင်းဒါး နဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယား အစ္စလာမ္မစ် အဖွဲ့ ဆိုတဲ့ ISIS နဲ့ ဆွန်နီ လူမျိုးစု တွေက တဖက် တိုက်ခိုက် နေကြ တာပါ။
မစ္စတာ မာလီကီက အန်ဘာ ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရ စစ်တပ် တွေကို ရုပ်သိမ်းပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ လုံခြုံရေးကို အစားထိုးဖို့ အင်္ဂါနေ့ တုန်းက သဘောတူခဲ့ ပေမယ့်၊ အစိုးရ စစ်တပ်တွေ ထွက်သွားတာ နဲ့ လက်နက်ကိုင် စစ်သွေးကြွတွေက မြို့တွေကို ဝင်ပြီး ရဲစခန်း တွေကိုစီးနင်း၊ အကျဉ်းသား တွေကို လွှတ်ပေးပြီး လက်နက် တွေကိုလည်း သိမ်းယူ ခဲ့ကြ ပါ တယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်က သူ့တပ်တွေကို နောက်နေ့မှာဘဲ ပြန်ပြီး စေလွှတ်ခဲ့ ပါတယ်။
မကြာသေး ခင်လတွေ အတွင်း အီရတ်နိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ဆွန်နီ မူဆလင်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပိုများလာ သလို၊ ရှီယာတွေ ဖက်ကလည်း အသေအကြေ ပြန်ပြီး လက်စားခြေ မှုတွေ ဖြစ်လာ တာကြောင့် လူမျိုးရေး အုပ်စု တွေကို အခြေခံတဲ့ ပြည်တွင်း စစ်မီး တကျော့ပြန် တောက်လောင် လာမှာကို စိုးရိမ် နေရ ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးခွဲတွေမှာ တပ်မတော် အရာရှိတွေကို ခန့်အပ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ တွေမှာ တာဝန်ထမ်းနိုင်ဖို့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိ ၆၁ ဦးကို ခန့်အပ် လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ၀န်ထမ်း အဖြစ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ရုံးကနေ ဗိုလ်မှူး အဆင့် ၅၈ ယောက်ကို လက်ထောက် ညွန်ကြားရေးမှုး တာဝန်ပေးပြီး ဗိုလ်ကြီး အဆင့် သုံးယောက်ကိုတော့ ဦးစီးအရာရှိ အဖြစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်းက စပြီး ခန့်လိုက်တဲ့အကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၇/ ၂၀၁၃ နဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုက ရှင်းပြရာမှာတော့ ခန့်တာက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဝန်ထမ်းတွေ အဖြစ်ခန့်လိုက်တာ ဖြစ်တယ် ၊ ခုလို လူအင်အား တိုးလာတဲ့ အတွက် လုပ်ရကိုင်ရ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ယူဆရပေမယ့် ဒီလို တပ်အရာရှိတွေနဲ့ လူအင်အား တိုးပေးရမယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ မဆိုလိုဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အခုလို စစ်တပ်က အရာရှိတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ခန့်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်အားအကြီးဆုံး အတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ဦးဉာဏ်ဝင်း ကတော့ ကော်မရှင်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဝန်ထမ်းနည်းလို့ အရင်က ငှားရမ်း ခန့်ထားရတာတွေ ရှိဖူးတာကြောင့် သူတို့က ကိုယ်ပိုင် ၀န်ထမ်းခန့်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးကြောင်း ၊ အခုတော့ ကော်မရှင်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်း ရသွားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါကို ကြိုဆိုကြောင်း ပြောပါတယ်။
တပ်မသားတွေကို ခန့်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့အနေနဲ့ မသိဘူး ၊ ဒါဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ ကာချုပ်တို့ သဘောထားပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ ထင်ကြောင်း ၊ ဘာကြောင့်မို့ ကော်မရှင်က စစ်တပ် အရာရှိတွေကို ယူတာလဲ ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးဌာနက ဘာကြောင့် ပို့တာလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အခု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ခွဲရုံးတွေ အတွက် ခန့်လိုက်တဲ့ စစ်တပ်အရာရှိတွေဟာ အရပ်သား အဖြစ် ပြောင်းပြီး တာဝန်ထမ်းမှာလား လက်ရှိစစ်တပ် တာဝန်တွေနဲ့ ပူးတွဲယူမှာလား ဆိုတာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေအများအပြား ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆို ထောင်ချရလေ့ရှိတဲ့ ပုဒ်မ ၁၈ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်မှု အပါဝင် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပဒေများ ပယ်ဖျက်၊ ပြင်ဆင်ရေး၊ ဥပဒေနှင့် မလျော်ညီတဲ့ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေ ရပ်တန့်ရေးအတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအနီးမှာ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
တရားဝင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပြီး လူ ၂၀၀ သာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးဆောင်သူ ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဦးကျော်ကျော်ထွေးခေါ် ဦးမာကီးကို ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက် ကိုပီတာအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ဘာကြောင့် ဆန္ဒပြကြတာလဲ။ ဆန္ဒပြခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ “အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပုဒ်မ ၁၈ ကို ဖျက်သိမ်းဖို့တင် မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်စနစ်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွေက စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ မြစ်ဖျားခံခဲ့တယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ သူတို့ အာဏာတည်မြဲဖို့ သူတို့ လိုသလိုဆွဲထားတဲ့ပုဒ်မတွေဟာ ဒီဘက် အစိုးရလက်ထက်မှာ မရှိသင့်တော့ဘူး။ အဲဒါကို ပြည်သူတွေ သိစေချင်လို့ ကျနော်တို့ ဆန္ဒ ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”
“နောက်ပြီး တည်ဆဲ ဥပဒေတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ လိုသလို အသုံးချပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို အရေးယူတာ၊ ဖိနှိပ်တာ၊ ထောင်ချတာတွေကို ရပ်တန်းကရပ်အောင် ပြည်သူတွေသိအောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ လူတွေသိအောင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။ ။ ပုဒ်မ ၁၈ အပြင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ဖိနှိပ်နေတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေထဲမှာ ဘယ်ဟာတွေကို ပယ်ဖျက်သင့်တယ်၊ ဘယ်ဟာတွေကို ပြင်သင့်တယ်လို့ ထင်လဲ။
ဖြေ။ ။ “ဥပမာ ပုဒ်မ ၅၀၅ တို့၊ ၅ ည တို့၊ ပုဒ်မ ၁၂၄ တို့၊ အဲဒါတွေက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အဓိက ဖမ်းဆီးတဲ့၊ ဖိနှိပ်တဲ့ အရေးယူတဲ့ ပုဒ်မတွေဖြစ်တယ်။ တချို့ပုဒ်မတွေ ဆိုရင် ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ ပုဒ်မတွေ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ပုဒ်မ ၄၄၇ ပိုင်နက် ကျူးလွန်မှုတို့ဆို နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိနေတယ်။ ရှိလည်းရှိသင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ လို့ မြင်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ပုဒ်မတွေကို လယ်သမားတွေကို အရေးယူခဲ့တာရှိတယ်။ လယ်သမားတွေဟာ သူတို့ လယ်မြေကို သိမ်းခံထားရတယ်။ သိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်မြေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားတဲ့ အခါမှာ သူတို့ လယ်မြေတွေ ပြန်ယူဖို့ သူတို့ အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ တရားစွဲ ဆိုခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးလွှတ်ပေးတဲ့ အထဲမှာ ဒီလယ်သမားတွေ ဆို ရာနဲ့ချီပြီးကျန်နေခဲ့တယ်။ ဧရာဝတီ တိုင်းတခုတည်းမှာပဲ လယ်သမားဦးရေ ၄၀၀၊ ၅၀၀ လောက် ထောင်ချခံ ထားရတာတွေရှိတယ်။ တချို့ဆို လုံးဝပြန်မလွှတ်ဘူး။ အဲဒီ့လို တည်ဆဲ ဥပဒေတွေ ကို လိုသလို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ ဖိနှိပ်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဒါတွေကို သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်၊ ပြည်သူတွေသိအောင် ထုတ်ဖော်တာပေါ့။”
မေး။ ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုး ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ဆန္ဒပြတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက လူတွေအမြောက်အမြား အဖမ်းခံရတယ်။ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။ ။ “ဆန္ဒပြခွင့်ကို ဒေသခံ မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေ လက်ထဲမှာထားတယ်။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ စခန်းမှူးတို့အဖွဲ့ လက်ထဲမှာထားတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် အလုပ်ရှုပ်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ပယ်ချခဲ့တာတွေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် မဖြစ်မနေ ဆန္ဒပြမယ့်သူတွေက ပြခွင့်မရှိဘဲ ဆန္ဒပြတယ်၊ အဲဒါကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ အရေးယူခံရတာတွေ များလာတာ ဖြစ်တယ်။”
မေး။ ။ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သင့်လဲ၊ ပုဒ်မ ၁၈ က လုံးဝမရှိသင့်တော့ဘူးလို့ ယူဆလား။
ဖြေ။ ။ “လုံးဝမရှိတာထက်စာရင် နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပဲ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှ ပြကြတာပါ။ ကျနော်တို့က ပုဒ်မ ၁၈ ကို ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း တခြားဆက်နွှယ်တဲ့ ဥပဒေတခု ပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်။ ပုဒ်မ ၁၈ ကို ဆန္ဒပြခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်လည်း မပေးတဲ့အကြောင်းအချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ တကယ်ကို ဆန္ဒပြပွဲက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အနှောင့်အယှက်မရှိဘူးဆိုရင် မဖြစ်မနေပေးဖို့၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ဥပဒေလောက်ပဲ ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။”
မေး။ ။ အစိုးရဘက်က တခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေဘက်ကရော လေးစားလိုက်နာဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်တာလဲ။
ဖြေ။ ။ “ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာသင့်တာကတော့ နိုင်ငံသားတိုင်းပေါ့။ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအ၀င် ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေတွေက လေးစားလိုက်နာဖို့ သင့်တဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ စည်းကမ်းဥပဒေဆိုတာက လိုက်နာဖို့လွယ်မှ တည်မြဲမယ်၊ ဖောက်ဖျက်တဲ့သူလည်း နည်းမှာပေါ့။ လိုက်နာဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အဲဒီဥပဒေတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေ၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ရှေ့မှာ ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ပြနေသရွေ့ သာမန်ပြည်သူတွေက ပိုပြီးတော့ ကျူးလွန်ဖို့ ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒါကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ လိုတယ်။”
ALP, ALD, RNDP ခေါင်းဆောင်တို့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်သစ်နုတ်ခွန်းဆက်စကား
လက်ရှိ အမေရိကန်မှာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသော နေထိုင်သူများက ကြောင်မွေး ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြောင်မွေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးကို အမေရိကန် ဆေးပညာရှင်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Credit : medicfacts
မန္တလေးမြို့ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ ဂရန်အတုပြုလုပ်ခြင်း
မန္တလေးမြို့ရှိ မြေကွက်တစ်ခုပြဿနာအား မမော်မှ Myanmar CNN သို့ တိုင်ကြားလာပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ -
မန္တလေးမြို့ ဒ-၈/၁၀၃ မြေကွက်အား ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် ပထမဦးစွာ မမော်လျှောက်ထားလာသည်ကို ဂရံအမှတ် ၂၅၂၅/၉၄-၉၅ ဖြင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် ဂရုံအတုတစ်ခု ထပ်မံပြုလုပ်ကာ နောက်တစ်ဦးအား ထပ်မံရောင်းချခဲ့ရမှ ပြဿနာစတင်ဖြစ်ပွားကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ပြဿနာဖြစ်ပွားသောအခါ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ မမော်၏ တရားဝင်လျှောက်ထားရယူခဲ့သော ဂရံကို အလွယ်တကူပင်ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။ မမော်မှ မကျေနပ်၍တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရာ ဒုတိယမြောက်ထုတ်ပေးခဲ့သော ဂရံအမှတ် ၃၉/၉၁,၉၂ မှာ ဂရံအတုဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ သက်သေပြနိုင်သောကြောင့် အမှုနိုင်ခဲ့သော်လည်း မမော်၏ မူလဂရံကိုမူ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပဲ၊ မူလဂရံကိုပြန်လည်ရယူလိုပါက တရားရင်ဆိုင်ရမည်ဟုဆိုသောကြောင့် တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် ၇ နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါသော်လည်း ယနေ့တိုင် အမှုမှာ ပြီးပြတ်ခြင်းမရှိ ကြန့်ကြာနေသည်ဟုဆိုပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ ပေးပို့လာသော စာများတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင်တံတား အမှတ်(၂) ၇၅ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ပြီးစီး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးသို့ ကုန်စည် စီးဆင်းမှုနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံ သွားလာမှုများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ လွယ်ကူစေရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ အထူး စီမံကိန်းကြီး အဖွဲ့(၅)မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်လျက် ရှိသော ရန်ကုန်မြို့ရှိ လှိုင်မြစ်ကို ဖြတ်သန်းကာ တည်ဆောက် နေသော ဘုရင့်နောင် တံတားအမှတ် (၂)စီမံကိန်းသည်၇၅ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ တံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တံတားသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ စတင်၍ ပန္နက်တင်ကာ ယခင်ဘုရင့်နောင် တံတားအမှတ်(၁)နှင့် ယှဉ်တွဲလျက် မြစ်ညာဘက်မှ ပေ ၂ဝဝအကွာတွင် တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပင်မတံတားမှာ အုတ်မြစ်နှင့် အောက်ထည် Bored Pile နှင့် R.C.D ဖြစ်ပြီး အပေါ်ထည်မှာ သံမဏိ သံပေါင်တံတား အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ချဉ်းကပ် တံတားမှာ အုတ်မြစ်နှင့် အောက်ထည်မှာ Bored Pile ဖြစ်ပြီး အပေါ်ထည်မှာ P.C Girder + RC Concrete အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ချဉ်းကပ် တံတား အရှည်မှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဘက်ကမ်းမှ ၈၁၉ ဒသမ ၃၆၄ ပေဖြစ်ပြီး လှိုင်သာယာ ဘက်ကမ်းမှ ၁၆၅၇ဒသမ ၁၃၄ ပေရှည်သည်။ ပင်မ တံတား အရှည်မှာ ၁၆၂၈ ဒသမ ဝ၃ ပေဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း တံတားအရှည်မှာ ၄၁ဝ၄ ဒသမ ၅၃ပေ ရှိသည်။
လူသွားလမ်းအကျယ် တစ်ဖက်လျှင် ၆ ပေရှိပြီး ၄၈ ပေကျယ်ကာ ကားလမ်းအကျယ်လေးလမ်းသွားဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးချင်း အလိုက် ၇၅ တန်ထိ တင်ဆောင် နိုင်ပြီး ဖြတ်သန်းသွား လာနိုင်သည်။ ယခုအခါ တွင် လူအင်အား၊ စက်အင်အား တို့ဖြင့် နေ့ ညမပြတ် အင်အား အပြည့်အဝသုံးကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်ထိ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ပြီးစီး နေပြီဖြစ်၍ လာမည့် ဇူလိုင်လတွင် အပြီး တည်ဆောက်သွားရန် သတ်မှတ် ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း တာဝန်ရှိ သူများထံမှ သိရသည်။
လှိုင်သာယာဘက် ကမ်းနှင့် မရမ်းကုန်း ဘက်အခြမ်းတို့ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အတွက် ရေလယ်တိုင်များ တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ရာ ရေလမ်း ကြောင်း ပိတ်ဆို့ ဆောင်ရွက်မှု အပေါ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၇ရက်တွင် ဘုရင့်နောင် တံတားအမှတ်(၂) စီမံကိန်းရှင်း လင်းဆောင်၌ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်မှသွင်းသော ကန့်မည်း ကွန်တိန်နာ အတွင်း သဲများသာတွေ့
တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာသော ကန့်မည်း (Black Sulphur) ကွန်တိန်နာတွင် သဲများသာ ပါဝင်ကြောင်း ထီးတန်းဆိပ်ကမ်းတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့က တွေ့ရှိထားကြောင်း အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက The Voice သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းအမည် လွဲပါလာသော ကွန်တိန်နာကို လက်ရှိတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်၊ မှတ်တမ်းယူကာ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။
"ဒီလိုပစ္စည်းအမည် လွဲတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဘက်က ဆုံးရှုံးမှု မရှိအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာက တင်ပို့တဲ့ ပြည်ပကုမ္ပဏီနဲ့ တင်သွင်းတဲ့ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီကြားမှာ ဘယ်လိုသဘော တူထားသလဲဆို တာအပေါ် မူတည်တယ်" ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများ မှာယူ တင်သွင်းသည့်အခါ ပစ္စည်းအမည်လွဲခြင်း၊ ပမာဏ လျော့ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းမပါ လာခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ယင်းသို့ဖြစ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် ကွန်တိန်နာများတွင် အဖြစ်များကြောင်း အကောက်ခွန်အေးဂျင့် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
"ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ရတာက LC (Letter ofCredit) နဲ့ မလုပ်လို့ ဖြစ်ရတာ။ LC Payment System က အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာက LC နဲ့လုပ်တဲ့အခါ အမျိုးမျိုး ရစ်ကြလွန်းလို့ ကုန်သည်တွေက မခံနိုင်ဘဲ TT (Telegraphic Transfer) ကို တောင်းဆိုပြီး လွယ်သလို လုပ်ကြရင်း အခုလိုဖြစ်ရတာ" ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်း မှာယူသည့် အခါ LC စနစ်နှင့်ပြုလုပ်ပါက ပစ္စည်း အမယ်လွဲမှား မှုရှိလျှင်လည်း ငွေ ကြိုတင် မပေးထားသည့်အတွက် တစ်ဖက်ကုမ္ပဏီ နှင့် ဖြေရှင်းရန် လွယ်ကူသော်လည်း TT စနစ်မှာမူ ငွေကြိုတင်ပေးထားရသည့် အတွက် ပစ္စည်းအမယ် လွဲမှားသည့်အခါ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင် များသာမက အကောက်ခွန်အေးဂျင့် များပါ ထိခိုက်စေကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမယ် လွဲမှားနေပါက ယင်းသို့ လွဲမှားကြောင်း သက်သေ အထောက်အထား နှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသံရုံးသို့ သွားရောက်ကာ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်၍ နှစ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ချင်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ အကြီးတန်းအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ဒီလို ပစ္စည်းလွဲလာပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က မိအေးနှစ်ခါနာ ဖြစ်နေပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့ တစ်ခုခု တောင်းဆိုဖို့လို အပ်တယ်။ LC က ကောင်းပေမယ့် ဒီမှာက အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုလွယ်တဲ့ TT ကိုပဲ သုံးကြတယ်" ဟု ဝါရင့် အကောက်ခွန်အေးဂျင့် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန။ ။ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ပထမဆုံးဦးဆောင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည့်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ နာယကဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်ပါ ပါဝင်သရုပ်ပြမည်ဟု ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ ဆန္ဒပြသည့် ပုဒ်မ ၁၈ အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ ပြည်သူလူထုအပေါ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သကဲ့သို့
ဖြစ်နေသည့် ဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေးစသည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်ပြီး ယနေ့ညနေ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားအနီး ဧမာနွေ လဘုရားကျောင်းရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မည် ဖြစ်သည်။
ယင်းပုဒ်မများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်မှုများအား ဇန်နဝါရီ (၄) ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့) ကလည်း မြိတ်မြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှုများ
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့မှ Eleven Media Group ၏ သတင်းထောက်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့မှုအပေါ် လက်မခံ ကန့် ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင်ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
aအာင်မြေသာစံ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း မန္တလေးခေတ်သတင်း ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမင်းဒင်က
ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက်၏ ဆန္ဒ
ထုတ်ဖော်ခွင့် မြို့နယ် ၅မြို့နယ်က ခွင့်ပြုပေးခဲ့သော်လည်း
မန္တလေးတွင် ခွင့်ပြုခြင်း မရှိဟု ဆန္ဒပြပွဲစီစဉ်သူများက
တရားရေး မဏ္ဏိုင်တွင်လွတ်လပ်စွာစီရင်နေခြင်း၊ တရားသူကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အား မကျေနပ်ပါက အယူခံတက်နိုင်ခြင်း၊ တရား
စီရင်မှု မှားယွင်း မှုကို သက်ဆိုင်ရာမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများ
ပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးသည့် လမ်းကြောင်း
ရွေးချယ်ထားခြင်းတို့ကို အကြောင်းပြချက်ပေး ရဲက ငြင်းပယ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းဒင်က ဆိုသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၇ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် အင်အား ၂၀၀
၀န်းကျင်ခန့် ၂၆လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းထောင့်မှစတင်ကာ မန္တလေး ကျုံးတောင်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန် ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့က စာတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်
သတင်းထောက်များ တင်ပြထားသည့်လမ်းက ဗဟိုလမ်းမ
ကြီးက အဓိကလမ်းကြီးဖြစ်နေပြီး ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေး၍
ခွင့်ပြုမိန့်ကို မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကန့်ကွက်
ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“လမ်းကြောင်းပြင်ဆင်ပြီး တင်ရင် ထွေအုပ်ကို ပြန်တင်ပေး
သွားမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
Eleven Media Group မှ သတင်းထောက် မခိုင်(ခ) နော်ခိုင်
ခိုင်အေးချိုအား သတင်းရယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ကျော်နင်းမှု
အပါအ၀င် ပုဒ်မ သုံး ခုဖြင့် လွိုင်ကော် မြို့နယ်တရားသူကြီးရုံးမှ ဒုမြို့နယ်တရားသူကြီးက ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ရက်နေ့က
ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့မှုအပေါ် ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမှ သတင်း
ရန်ကုန်မြို့ သတင်းသမားများသည် ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့
နံနက် ၉နာရီ တွင် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် တာမွေမြို့နယ်
Eleven Media Group ရုံးအထိ မြို့နယ် ၅မြို့နယ် ဖြတ်သန်း၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
မီးဖွားသူ အနွေးဓာတ်ရရှိရန် မီးသွေးမီးဖို ထားရှိခဲ့ရာမှ လူသုံးဦး သတိလစ်ပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ ခိုပဲဝရပ်ကွက်တွင် မီးဖွားသူ အနွေဓာတ်ရရှိရန် အခန်းအတွင်း မီးသွေးမီးဖို ထား ရှိခဲ့ရာမှ လူသုံးဦး သတိလစ်မေ့မျှောနေခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့်အတွက် ဟုမ္မလင်းမြို့မရဲစခန်းက ယခုလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲ အချိန်က သေမှုသေခင်းရေးဖွင့်၍ စီစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဟုမ္မလင်းမြို့၊ ခိုပဲဝ ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်သောင်း၏ သမီး မစုလှိုင် ဆိုသူသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က အာရ်စီ တစ်ထပ် တိုက်တန်း အခန်းအကျယ် (၁၀)ပေပတ်လည်၊ အမြင့် (၁၄)ပေရှိ၊ နေအိမ်တိုက်ခန်းအတွင်း၌ မီးဖွားခဲ့ရာ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်တင်မြနှင့် သမီးဖြစ်သူ မနွေးသီရိထွန်း ဆိုသူတို့က မီးဖွားသူအား ကူညီစောင့်ရှောက်ရန် အဆိုပါ တိုက်ခန်းအတွင်းရှိနေ စဉ် မီးဖွားသူ အနွေးဓာတ်ရရှိရန် မီးသွေးမီးဖိုအား မွှေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သေဆုံး၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့နောက် ယခုလ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီက ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်သောင်းမှ နေအိမ်တိုက်ခန်း တံခါးအား ဆွဲဖွင့်ကြည့်ခဲ့ ရာ မီးဖွားသူ၏ တိုက်ခန်းအတွင်းရှိ လူသုံးဦးမှာ သတိလစ်မေ့မျှောနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အတွက် ကုတင်(၁၀၀)ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ဆေးကုသနိုင်ရန် အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာ ဒေါ်တင်မြ အသက်(၆၅)နှစ်ဆိုသူမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မှုခင်းမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြား သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ လူသေဆုံးရခြင်းအား ဟုမ္မလင်းမြို့မ ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၂/ ၂၀၁၄ အရ အမှုရေးဖွင့်၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယသမ္မတပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက လက်ရှိမြန်မာလူမျိုး အတော်များများရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးဖတ်ပေးပါ။ သဘောတူတယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လူတွေ သိအောင်ရှယ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
" မင်းနိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀မိနစ်ရမလား..? ရတယ်ဆိုမှ ဒီစာကိုဆက်ဖတ်ပါ…အချိန်မရှိရင်တော့ မင်းသဘောပဲ…
တို့အိန္ဒိယအစိုးရက လုပ်ဆောင်မှုတွေမထိရောက်ဘူး မင်းပြောတယ်…တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကလဲ အိုဟောင်းပြီး ခေတ်မမီတော့ဘူး မင်းပြောတယ်…စည်ပင်ကလဲ အမှိုက်တွေမရှင်းဘူး မင်းပြောတယ်….ဖုန်းလိုင်းတွေကလဲ အလုပ်မလုပ်တာခပ်များများလို့ မင်းပြောတယ်… မီးရထားဆိုတာ ဟာသတစ်ခုပဲ..အဲလိုင်းတွေဆို ကမ္ဘာမှာ အဆိုးဆုံး…စာပို့စနစ်မှာလဲ ဘယ်တော့မှ ပို့တဲ့စာက မရောက်ဘူး…တို့တိုင်းပြည်မှာ အားလုံးက ခွေးစာကျွေးပစ်ရတော့မလောက် ပျက်စီးစုတ်ပြတ်မှုတွေချည်းပဲ လို့ မင်းပြောတယ်…
မင်းပြော… မင်းအဲ့ဒါတွေချည်းပဲ ပါးစပ်ကနေပြောပြီး…မင်းကရော ဘာတစ်ခုလုပ်လဲ…?
စင်ကာပူကလမ်းတွေပေါ် မင်းဆေးလိပ်လွှင့်မပစ်ရဲဘူး..စတိုးဆိုင်မှာ မုန့်မစားရဲဘူး..
သူများတိုင်းပြည်မှာ သူ့စည်းကမ်းနဲ့အညီ အတိအကျလေးစားလိုက်နာနိုင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ရောက်မှ စည်းကမ်းကိုမလေးစား စည်းကမ်းပျက်တတ်တဲ့ မင်းကိုပဲ မေးနေတာ…..
တခြားတိုင်းတပါးမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာလေးစားတတ်ခဲ့တဲ့မင်းက ကိုယ့်မွေးရပ်နိုင်ငံမှကျတော့ ဘာလို့ ပုံစံအတူတူမလုပ်နိုင်ရတာလဲ….
အမေရိကားမှာကိုယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆီက ထွက်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေ သန့်စင်ပေးဖို့ ပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူရတယ်..ဂျပန်မှာလဲဒီလိုပဲ…
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာတာဝန်မှမရှိသလိုနေပြီး အရာအားလုံးကို အစိုးရကပဲ ကကြီး ခခွေးကအစ လိုက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ ထိုင်မျှော်လင့်နေကြတယ်….ကိုယ်တိုင်ပါဝင်အားဖြည့်မှု သုည….
အမှိုက်လေးတွေ ကြုံသလိုလျှောက်ပစ်ရင်း မြို့တော်သာယာလှပဖို့ အာဏာပိုင်တွေကို ထိုင်စောင့်နေကြတယ်…အဲဒီ့အစား အမြင်မတော်တဲ့ စက္ကူတစ်စကို အမှိုက်ပုံးလေးထဲရောက်အောင်ထည့်လိုက်ဖို့တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတယ်…..
ရထားဘူတာရုံတွေမှာ သန့်စင်ခန်းတွေ ထားပေးစေချင်ကြတယ်..ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့သန့်စင်ခန်းတွေကို ကျကျနနဘယ်လိုသုံးရမလဲတော့ အလေးမထားဘူး…
ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အစိုးရ အကုန်လုံးပါဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးလား….
ဒါပေမဲ့ သေချာပါတယ်..တကယ်တမ်း လက်တွေ့ကျကျ ပါဝင်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ကျတော့
အားလုံးက ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့အတူတူ စိတ်ချလုံခြုံတဲ့အိမ်လေးထဲအတူတူထိုင်နေကြပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေ ခပ်လှမ်းလှမ်းပဲ စောင့်ကြည့်နေကြမှာပါ…
သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ မောင်သန့်ရှင်းကြီးတစ်ယောက် မိုးပေါ်ကနေကျလာပြီး အာလုံးကိုနေရာတကျပြန်ဖြစ်သွားအောင် လှဲကျင်းရှင်းလင်းပြောင်းလဲပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်လဲ မျှော်လင့်နေကြမှာပေါ့……
ဒါမှမဟုတ်လဲ တတ်နိုင်သူတွေက တခြားတိုင်းတပါးကို ပြောင်းရွှေ့သွားရင်လဲသွားလိမ့်မယ်….
ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ အမဲလိုက်ခွေးကြီးလက်ကနေ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးတဲ့ သူရဲဘောလေးတွေလိုပဲ…သူတို့စိတ်ထဲမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ အမေရိကားရဲ့ ဂုဏ်သရေတော်အောက်မှာနေပူစာလှုံခွင့်တောင်းခံကြပြီး အမေရိကားရဲ့ လူနေမှုစနစ်တွေကို တဖွဖွချီးမွန်းခန်းဖွင့်နေကြလိမ့်မယ်…..
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ စနစ် ခေတ်ကို အားပြည့်တိုးတက်လာဖို့တော့ ဘယ်သူမှ အပင်ပန်းခံပြီး မစဉ်းစားချင်ကြဘူး…
တိုင်းပြည်က သင့်ကို ဘာပေးနိုင်လဲလို့ မေးမယ့်အစား..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့် အတော်လေး အတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အမီ ပြင်ဆင်နိုင် မယ့် လက္ခဏာတွေ အခုချိန်မှာ တွေ့နေရပါတယ်။ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့် ရစေမယ့် အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အဆိုပြုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Gabrielle Paluch က စုစည်းထားတာကို မသိင်္ဂီထိုက်က ပြောပြပေးမှာပါ။
သိင်္ဂီထိုက် (VOA Burmese News)
ရန်ကုန် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃ ။ ။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုး မှုရှိရေး အထောက်အပံ့ဖြစ်စေ ရန်အတွက် တရားဥပဒေစိုး မိုးရေးစင်တာများ ကို မန္တလေး နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စတင်ဖွင့် လှစ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥပဒေရေး ရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များလေ့ လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော် မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဆန်းက ရန်ကုန်တိုင်းမ် သတင်းစာသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါတရားဥပဒေစိုး မိုးရေးစင်တာများကို ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီး တွင် ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်း ဆက် လက်ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း ကို ဇန်နဝါရီ ၂ရက်က အင်း လျားလမ်းရှိ လွှတ်တော်ရုံးခွဲ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေး ချမ်းရေးကော် မတီ အတွင်း ရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်က ''စင်တာ တွေဖွင့်ဖို့ဆိုတာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေ ဖို့ပါ။ အခုမှလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းဆွေး နွေး တုန်းပဲရှိသေးတယ်။ သေ ချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချရ သေးပါ ဘူး''ဟုပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ် တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော် မတီ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ၏ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်အသီးသီး မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည် ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ပြည်ထောင် စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် UNDP မှကိုယ်စားလှယ်တို့ တက် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နန်းသီတာဝင်း ၊ ဒီခေတ်နေ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်း အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ ညီညွတ်ရေးကို အထိခိုက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေး နေ့ အခမ်းအနားကို NLD ဌာနချုပ်မှာ ကျင်းပချိန်အတွင်း အဲဒီလိုပြောခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကို မဆုမွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မဆုမွန် (VOA Burmese News)
ရန်ကုန် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃။ ။ ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီပိုင် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာတိုက်ခန်းများအား အစိုး ရဝန်ထမ်းများသာမက ဝယ်ယူ လိုသူအားလုံး ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သို့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရောင်းချမည့်တိုက်ခန်း ဈေးနှုန်းများမှာ U900 အမျိုး အစားတွင် Type A ၌စတုရန်း ပေ ၉၂၇ပေရှိ အခန်း ၉ဝအား တစ်ခန်းလျှင် ကျပ်၃၄၇သိန်း ဖြင့်လည်းကောင်း Type B တွင် စတုရန်းပေ ၈၇ရပေရှိအခန်း ခြောက်ခန်းရှိပြီး တစ်ခန်းလျှင် ကျပ် ၃၂၉သိန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ U600 အမျိုးအစား Type A တွင် စတုရန်းပေ ၆၁၄ပေရှိ အခန်း ၃၃ဝရှိပြီး တစ်ခန်းလျှင် ကျပ် ၂၅၅သိန်းဖြင့်လည်းကောင်း Type B တွင် စတုရန်းပေ၅၆၅ ပေရှိအခန်း ၂၂ခန်းရှိပြီး တစ် ခန်းလျှင် ကျပ် ၂၃၇ သိန်းဖြင့် လည်းကောင်း ရောင်းချပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ဗထူး တန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာတိုက်ခန်း ဝယ်ယူလျှောက် ထားသူ သည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဖြစ် ပြီး အစိုးရဝန် ထမ်းဖြစ်ပါက လုပ်သက်အနည်းဆုံး၂ဝနှစ်ရှိ ရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားပြင်ပ မှ လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင် သူ (အိမ်ထောင်ဦးစီး)သည် အ သက်၂၅နှစ်ထက် မငယ်သူဖြစ်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(သို့)ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင် ရာဌာန၏ အကြီးအကဲထောက် ခံချက်ပါရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ တိုက်ခန်းများအား နည်းလမ်း နှစ်သွယ်ဖြင့် ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ပြီး
(ခ)ဘဏ်ချေးငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူရန်နှင့် ဘဏ်ချေးငွေ မှာ လေးနှစ်အများဆုံး သတ် မှတ်ထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
''ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာတိုက်ခန်းတွေကို အ မှန်တကယ် ဝယ်ယူမယ့် သူတွေ ကိုပဲ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။ ဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေက ငါး နှစ်အတွင်း မှာ ရောင်းချတာ တွေ ငှားရမ်းတာတွေတွေ့ရင် အရေးမယူဘူး။ အဲဒီတိုက်ခန်း တွေကို ပြန်သိမ်းယူမယ်။ အရစ် ကျစနစ်နဲ့ ဘဏ်ချေးငွေ စနစ်ကို ဝယ်ယူမယ့်သူတွေ ဘယ်လိုပြန် ဆပ်ရမယ်ဆို တာတိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရက ဆုံးဖြတ်ပေးမှာ ပါ''ဟုပြောသည်။
ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာတိုက်ခန်းများကို လျှောက်ထားသူ၏ (မိသားစု)ပျှမ်းမျှလစဉ်ဝင်ငွေစုစုပေါင်း အနည်းဆုံးကျပ်သုံးသိန်းရှိ ရ မည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ၏(ဆွေမျိုးများပါသော မိသား စု)ပျမ်းမျှလစဉ် ဝင်ငွေ စုစုပေါင်း ခုနစ်သိန်းအောက် ရှိရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ လျှောက် ထားသူသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစား ဖြစ်ပါ က ယင်းတို့၏စုဆောင်းငွေဖြင့် အရစ်ကျငွေချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူ ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ချေးငွေစနစ်နဲ့ ဝယ်ယူ လျှောက်ထားသူက သူရဲ့မိသား စုဝင်တွေရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေအတွက် တိကျခိုင်မာတဲ့အထောက်အ ထားကိုတင်ပြရပါမယ်။ လာ လလျှောက်တဲ့ လျှောက်လွှာ တွေပေါ်မူတည်ပြီး အစိုးရဝန် ထမ်းက ဘယ်နှခန်း၊ အခြားအ ပြင်ဝန်ထမ်းတွေက ဘယ်နှခန်း ဆိုတာသတ်မှတ်ပြီး မဲနှိုက်ရွေး ချယ်ပေးသွားမှာပါ''ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
''မျှတတဲ့တန်ဖိုးဆိုပေမယ့် ဒီတိုက်ခန်းတွေက တိုက်ခန်း ကျယ်တွေဖြစ်နေတော့ ဝယ် နိုင် ဖို့ကစဉ်းစားနေရတယ်။ ရေရှည် မှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာမှာလဲ စိုးပါတယ်''ဟု အိမ်ငှားနေထိုင်သူ ကုမ္ပဏီဝန် ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုညီညီ ကပြောသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့်ရပြီ